Wasiir: Xalka Kulmiye waa iney tartamaan Siilaanyo & Biixi – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir: Xalka Kulmiye waa iney tartamaan Siilaanyo & Biixi
7th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Hargeysa – Mareeg.com: Wasiirka cadaalada maamulka Somaliland, Xuseen Axmed Caydiid ayaa sheegay in xalka qura ee khilaafka KULMIYE uu ku dhamaan karo uu yahay in tartan uu xisbiga dhexdiisa uu ku maro Madaxweynaha Jamhuuriyada Somalialnd Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo Gudoomiyaha Xisbiga Muxaafadka ah ee KULMIYE, Muuse Biixi Cabdi.
Wasiirka Cadaalada oo shalay ka qayb galay dood adag oo dhex martay isaga iyo masuuliyiin kale ka tirsan garabka Muuse Biixi oo ay qabatay Idaacada BBC-da ayaa sheegay in uu Muuse Biixi ugu hambalyeynaayo in uu la tartamo madaxweynaha dalka, waxaana uu carabka uu ku dhuftay in ay si aad ah u soo dhawaynayaan.
“Guddoomiyaha xisbiga, waanu ku hambalyeynaynaa inuu madaxwaynaha la tartamayo, waanuna ku soo dhaweynaynaa, waana midda qudha ee aanu doonayno inuu xalku ku dhamaado” ayuu yiri wasiirka cadaalada Somaliland Axmed Ceydiid.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo ayaa qudhiisu dhawaan shaaciyey inuu diyaar u yahay inuu la tartamo Muuse Biixi oo ka wada tirsan yihiin xisbgiga Kulmiye.
Khalilaafka u dhaxeeya madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanmyo iyo gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Muuse Biixi ayaa ku saleysan cidda xilka madaxweynaha ugu tartameysa xisbiga ay kawada tirsan yihiin ee Kulmiye.
Galmudug oo lagu wareejiyey ajaanib burcad heysatay
Madaxweyne Xasan oo ka qeybgelaya caleema saarka Siisi